Chebere: Storelọ ahịa, Jikwaa, ma hazie vidiyo na Ọdịnaya Media bara ọgaranya na Agile DAM | Martech Zone
Were: Chekwaa, Jikwaa, ma Hazie Vidio na Ọdịnaya Media Ọgaranya na Agile DAM a
Dijital Inweta Management (DAM) nyiwe adịla ihe karịrị afọ iri, na-enyere nnukwu ụlọ ọrụ aka ịchekwa, jikwaa, hazie ma kesaa faịlụ mgbasa ozi ha bara uru nke ọma. Nke a bụ nnukwu vidiyo na-akọwa ihe etu Imagen si enyere ụdị aka ịmịnye ma jikwaa akụ ha ka mma:
Imagen na-enye ngwaahịa abụọ DAM:
Ihe ngwangwa njikwa ngwa ahịa agile iji chekwaa ma hazie vidiyo gị niile na ọdịnaya mgbasa ozi bara ụba. Iblenweta remotely site na ngwaọrụ ọ bụla ejikọrọ maka gị iji kpado, kesaa, kọwaa, na ndị ọzọ.
Imagen Go Atụmatụ gụnyere:
nchekwa - Dọrọ na dobe faịlụ ma ọ bụ folda folda site na ngwaọrụ ọ bụla ejikọrọ ebe ị nwere ike ịkpado, kọwaa, na ndị ọzọ.
ọchụchọ - nyocha di ọsọ ma zie ezi nke na enyere ndị otu okike ma ọ bụ ndị ahịa gị aka ịchọta ngwa ngwa ha na-achọ.
Akpado na akpaghị aka - jiri obere oge na ntinye AI mee ihe na - eme ka ọdịnaya gị dị mfe ịchọta site na iji isiokwu dị mfe.
Njikọ Aka - Kpọọ ndị otu ka ha rụkọta ọrụ, nyochaa, gwaa ma kwado ọdịnaya. Pụrụ ọbụna akara-elu kpọmkwem ebe ke videos na ihe oyiyi.
Belata ibu ọrụ nke njikwa faịlụ, jiri akụ rụọ ọrụ nke ọma, nyefee ngwa ngwa ngwa ngwa, ma hụ na njikwa akara.
Chee ọnwụnwa efu
Na-elekwasị anya na egwuregwu na ụlọ ọrụ mgbasa ozi, Imagen Pro bụ usoro njikwa vidiyo nwere ọgụgụ isi na-enyere gị aka ịhazi ọdịnaya dị mgbagwoju anya gị, na-etinye gị njikwa. Chekwaa, chọta, lelee, kesaa ma jikwaa ọdịnaya gị na ịdị nro, ma mepee uru, site na ika gị na akara ala gị.
Imagen Pro Atụmatụ gụnyere:
Lọ ahịa - A na-edebe vidiyo, onyonyo, odiyo, dọkụmentị na soshal midia na nchekwa nke ọma, na-adị mfe.
chọta - Nweta usoro mgbasa ozi gị niile na ịdị nfe. Intuitive ingest na management management pụtara pọtụfoliyo gị ahazi, edepụtara yana njikere igwu egwu.
View - Imagen Pro dabara nke ọma na azụmaahịa gị. Na-ebuli ahụmịhe onye ọrụ maka ndị na-ege gị ntị. Hazie ikpo okwu, mepụta ego, ma melite nloghachi na itinye ego na nchekwa akwụkwọ gị.
jikwaa - Mepee ikike nke vidiyo gị site na iji njikwa njikwa ọgụgụ isi na-ahapụ gị ịchịkwa, hazie, kesaa, nyochaa ma dozie ebe nchekwa gị.
Kesaa - Ma ị na - ele ihe a na - achọ, na - ebupụta ndụ, ma ọ bụ na - ebute faịlụ dị njikere maka ịgbasa ozi, Imagen Pro na - ejikọ ndị na - ege gị ntị na ọdịnaya ha chọrọ - na ọsọ ọsọ ọsọ.
Imagen na-enyekwa atụmatụ-ọgaranya API iji jikọta ngwaahịa ha n'ụzọ zuru ezu na ntanetị gị.
Tags: agile damaiakpado na akpaghị akaakpaakaautotaggingdamnjikwa ihe onwunwe dijitalụimagenimagen agachere pronjikwa akụ bara ụbaegwuregwu egwuregwuvideo akpan owo management